I-agate yeediliya ligama lokurhweba, le nyani yile chalcedony ye-botryoidal - ividiyo
tags ngeerubhi, chalcedony, Amagilebhisi
Thenga i-agate yendalo yemvelo kwivenkile yethu
I-agate yeediliya ligama lokurhweba, ezi nyani zi-chalcedony ze-botryoidal. I-botryoidal kuthetha ukuba i-kristale encinci yomjikelezo omncinci owenziwe ngokwemvelo.
Umbhalo we bototyoidal okanye umkhwa wamaminerali yenye yeendawo apho amaminerali anefomathi yangaphandle ebanzi njengeqela leediliya. Olu luhlobo oluqhelekileyo lwezimbiwa ezininzi, ngakumbi i-hematite, ubume obuvunyiweyo. Ikwayindlela eqhelekileyo ye-goethite, smithsonite, fluorite kunye neMalachite. Oku kubandakanya i-chrysocolla.
Indawo nganye okanye iidiliya kwimaminerali ye-botryoidal incinci kunaleyo yezimbiwa ezigqityiweyo, kwaye incinci kakhulu kunaleyo yezimbiwa. Iiminerali ze-botryoidal ziba zii-nuclei ezininzi ezikufuphi, amabala esanti, uthuli, okanye amanye amasuntswana akhoyo. Amakristali e-acicular okanye e-fibrous akhula enemitha ejikeleze i-nuclei ngomlinganiselo ofanayo, avele njengamanqanaba. Ekugqibeleni, la manqanaba ayabanjwa okanye agubungele awona akufuphi. La manqanaba akufuphi adityaniswa kunye ukuze enze iqela le-botryoidal.
I-agate yomdiliya - i-botryoidal purple chalcedony quartz
I-Chalcedony yindawo ye-silika ye-cryptocrystalline, equlathe i-intergrowths entle kakhulu ye-quartz kunye ne-moganite. Zombini ezi zinamaminerali silica, kodwa zahlukile kule quartz inesakhiwo sekristale esine-trigonal, ngelixa i-moganite eyi-monoclinic. Ubume bemichiza esemgangathweni yeCalcedony yiSiO₂.
I-Chalcedony ine-luster exy, kwaye ingaba yinto ehamba phambili okanye idlulileyo. Ingakwazi ukuthatha uluhlu olubanzi lwemibala, kodwa ezo ziqhelekileyo zibonwa zimhlophe zibe zimpunga, ziluhlaza okwesibhakabhaka okanye umthunzi onobubhakabhaka obusuka kwilinen ukuya kumnyama. Umbala we-chalcedony uthengiswa ngezorhwebo ngokuqhelekileyo ukuphuculwa ngokutshiza okanye ukufudumeza.
Intsingiselo ye-agate ye-agate
I-agate yeediliya ikhuthaza ukuzinza kwangaphakathi, ukuqina, kunye nokuvuthwa. Iimpawu zayo ezifudumeleyo nezikhuselayo zikhuthaza ukhuseleko kunye nokuzithemba. Ivumela amanqanaba anzulu kwaye abanzi okucamngca ngexesha elifutshane. Eli litye lilitye le-crystal lamaphupha, i-intuition, kunye nokunethezeka.
I-agate yediliya evela eIndonesia
tags ngeerubhi, Amehlo aphuzi
I-agate ephanyayo ye-lace
tags ngeerubhi, Umtya ophucukileyo
tags ngeerubhi, geodi
tags ngeerubhi, Moss
Ukuhanjiswa simahla kwayo nayiphi na iodolo ye-US $ 100.00 kwivenkile yethu